စွန့်ပစ်တာယာပြုပြင်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်တာယာတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဓိကကုန်ကြမ်းသုံးမျိုးအားလုံးလုံးခွဲခြားသည့်ကျယ်ပြန့်သောပစ္စည်းကိရိယာစုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခန်းအပူချိန်တွင်ရာဘာ၊ သံမဏိဝါယာကြိုးနှင့်ဖိုင်ဘာတို့ကို ၁၀၀% ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကိုသဘောပေါက်သည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတုိုက်ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရအချင်း ၄၀၀ မှ ၃၀၀၀ မီလီမီတာအတွင်းတာယာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခိုင်မာသောသက်ဆိုင်မှု ရှိ၍၊ ထုတ်လုပ်မှုအရွယ်အစားကို ၅ မှ ၁၀၀ မီလီမီတာအတွင်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ ထုတ်လုပ်မှုသည် 200-10000kg / h အထိရှိသည်။ ။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အခန်းအပူချိန်တွင်ရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုတိယညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီးတာရှည်ခံသည်နှင့်အတူလည်ပတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည့် PLC control system ကိုအသုံးပြုသည်။
အသိဉာဏ်ရှိသော two-axis motor shear crusher သည်အမြန်နှုန်းနိမ့်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသော torque ၏အရွယ်အစားများအားလုံးအားအရွယ်အစားအားလုံး၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာများကိုကြိတ်ခွဲပြီးကာလရှည်တည်မြဲသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေနိုင်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာကိုဥရောပမှတင်သွင်းသောမြင့်မားသောအလွိုင်းသံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနှစ်တန်းတန်းဖြတ်စက်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖြုတ်တပ်နိုင်သောအစားထိုးဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ၏အသုံးချနှုန်းကိုတိုးတက်စေသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသက်သာစေရန်နှင့်အာကာသကိုအသုံးပြုရန်အတွက်တစ်ပြိုင်တည်းတည်းဓါးသေတ္တာတစ်ခု၏အမျိုးမျိုးသောအလုပ်လုပ်သောနေရာများတွင်ကြမ်းကြိတ်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာကြိတ်ခွဲခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။
ကော်ကိုပိတ်ဆို့ရန်ဓါးဖြင့်ရွေ့လျားထားသောဓားနှင့် ဖြတ်၍ ဓါးဖြတ်ခြင်း၊ ဆန်ခါမှ ဖြတ်၍ အရည်အချင်းပြည့်မီသောရော်ဘာအမှုန်များနှင့်သံမဏိဝါယာကြိုးတို့ကို ဖြတ်၍ နှိပ်နယ်ခြင်းအတွက်ကြိတ်ခွဲသောနေရာတွင်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ သေတ္တာနှင့်အကြားဟိုက်ဒရောလစ်အဖွင့်အပိတ် မျက်နှာပြင်သည်ဖြတ်တောက်သောကိရိယာများနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ရွေ့လျားနေသောဓားနှင့်ရှေ့ဓားသွားပုံစံ၏ရှေ့နှင့်နောက်ကျော symmetry ဒီဇိုင်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်း ဦး တည်ချက်လေးခု၏အပြောင်းအလဲကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီး tool ၏သက်တမ်းကိုတိုးတက်စေသည်။ ဝါယာကြိုး - လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း။ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပြီးနောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စည်းဘောင်၏ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ကိုအမှိုက်ပုံးများဖြင့်ကုသပြီးအထူးသဖြင့်အမှိုက်သရိုက်များညစ်ညမ်းခြင်းကဲ့သို့သောအထူးပတ်ဝန်းကျင်အောက်ရှိပစ္စည်းများ၏ရေရှည်လည်ပတ်မှု၏အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အဝေးမှစတင်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်း၊ အရေးပေါ်မှတ်ခြင်း၊
ပစ္စည်းစိစစ်မှုအတွက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောသီးခြားပစ္စည်းများသို့ disc လှိမ့်ခြင်း၏အလုပ်လုပ်သောနိယာမကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုထုတ်လွှတ်သည့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် disc ၏ကွာဟမှုကိုညှိခြင်းဖြင့်မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောမျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်သည်အမှုန်အရွယ်အစားများထုတ်လွှတ်မှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်အထိပြန်လည်ကြေမွရန်အတွက်ကြိတ်ခွဲစနစ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ပျက်စီးသွားရန်မလွယ်ကူ။ အလုပ်ခွင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်သုံးနိုင်သည့်တင်သွင်းသောပိုလီမာပိုလီမာပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော modular ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းစွမ်းရည်ညှိနှိုင်းမှု၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် setting ကို, ဒါကြောင့်စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပစ္စည်းစုဆောင်းသို့မဟုတ်အကွေ့အကောက်များသောလျော့နည်းနိုင်အောင်, ပစ္စည်းကိရိယာများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုပိုမိုရိုးရှင်းများနှင့်အစာရှောင်ခြင်း။
သံလိုက် separator အမျိုးအစားမှာအမြဲတမ်းသံလိုက် Self-discharging အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးခွဲထုတ်ပြီးနောက်သံမဏိဝါယာကြိုးကိုထိထိရောက်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
သံမဏိဝါယာကြိုးကိုတုန်ခါခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားသောရာဘာပိတ်ပင်ခြင်း / သံမဏိဝါယာကြိုးများနှင့်ကွဲကွာသည်။ သံမဏိဝါယာကြိုးရော်ဘာအမှုန် / အမှုန့်သာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှသာတုန်ခါမျက်နှာပြင်အောက်ရှိမျက်နှာပြင်ရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဆန်ခါနှင့်သံမဏိဝါယာကြိုးများကို ဖြတ်၍ မဖြတ်နိုင်သောရော်ဘာအမှုန့်များသည်ခါးပတ်သယ်ဆောင်သူမှစံသတ်မှတ်ချက်သို့မရောက်မှီအလယ်တန်းကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်သံမဏိဝါယာကြိုးခွဲစက်သို့ထပ်မံပို့ဆောင်ပေးသည်။
အဓိကထိန်းချုပ်သောကက်ဘိနက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုပလက်ဖောင်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူကွဲပြားသည်။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်ခလုတ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ဒီဇိုင်းသည်ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုလူသားဆန်ပြီးလုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေသည်။ အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှုသည်မောင်းသူမဲ့စက်ကိုသိနိုင်သည်၊ လက်စွဲစနစ်သည်စက်တစ်ခုတည်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ အသုံးပြုသူများသည်အချိန်မရွေးအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရန်ကွဲပြားသောမုဒ်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စနစ်တွင်အသံနှင့်အလင်းသတိပေးချက်၊ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းမှုသတိပေးချက်၊ စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသတိပေးချက်နှင့်အခြားအသိဥာဏ်ရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည်။ သို့မှသာပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာအချိန်မီရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးအမှားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အလုပ်။ အပြည့်ပါသောဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာသည်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်၍ စက်ကိရိယာ၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးနိုင်သည်။
1. မော်ဒယ်ဒီဇိုင်း, သေးငယ်တဲ့ခြေရာ
ပစ္စည်းကိရိယာလိုင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်။ အထူးကြပ်မတ်စွာမြေယာအသုံးပြုမှုနိယာမကိုလိုက်နာသည်။ နှစ်ဆရိုးလှည့်လှည့်စက်နှင့်လက်စွပ်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကိုလက်ခံသည်။ ဖောက်သည်များ၏တာယာစွန့်ပစ်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏စီမံကိန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
2.Itegral ဓါးအမှုဒီဇိုင်း, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော
အပူသန့်စင်ပြီးနောက်ကိရိယာသေတ္တာသည်ခိုင်ခံ့။ ၀ တ်ဆင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစက်ကိရိယာ၏သက်တမ်းကိုရှည်စေပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုထိရောက်စွာလျှော့ချပေးသည်။
3.Fixed ဓါးလွတ်လပ်သောဖြုတ်တပ်နိုင်, ခိုင်ခံ့သော wear ခံနိုင်ရည်
ပုံသေဖြတ်စက်တစ်ခုစီကိုတပ်ဆင်။ သီးခြားစီတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုအချိန်တိုအတွင်းတပ်ဆင်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးအောင်လုပ်နိုင်သည်၊ လုပ်သားများ၏ပမာဏကိုများစွာလျှော့ချပြီးထုတ်လုပ်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေသည်။
4. Unique tool ကိုဒီဇိုင်း, ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အစားထိုးရန်လွယ်ကူသည်
ဗိုင်းလိပ်တံကိုစွမ်းအားမြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ များစွာသောအပူကုသမှုနှင့်တိကျမှုမြင့်မားသောအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောစက်မှုစွမ်းအား၊ ခိုင်မာမှုမရှိသော anti-impact စွမ်းရည်နှင့်သက်တမ်းကြာရှည်သည်။
ပေါင်းစပ်တံဆိပ်များနှင့်အတူ 6.Imported ဝက်ဝံ
စက်၏စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အတွက်တင်သွင်းခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ မြင့်မားသောဝန်ခုခံခြင်း၊ သက်တမ်းရှည်သော၊
က။ အလိုအလျောက်နစ်မြုပ် - arc ဂဟေဆော်နည်းပညာချမှတ်ခြင်း
ခ။ ဂဟေဆော်ခြင်းအားလုံးကိုဂဟေဆော်မှုအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးတို့ကိုသေချာစေရန်အတွက် ultrasonic nondestructive testing method ဖြင့်တွေ့ရှိလိမ့်မည်
ဂ။ အရည်အသွေး၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ ထုတ်လုပ်မှုနေ့စွဲစသည်တို့အပေါ်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်ကိုချမှတ်ခြင်း
d. ပေါက်ကွဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိရိယာ၊ လုံခြုံရေးအဆို့ရှင်များ၊ အရေးပေါ်အဆို့ရှင်များ၊ ဖိအားနှင့်အပူချိန်မီတာများအပြင်သတိပေးစနစ်များပါ ၀ င်သည်။
က။ ထုတ်လွှတ်မှုစံ - မီးခိုးမှအက်ဆစ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်အထူးဓာတ်ငွေ့တိုက်စက်များအသုံးပြုခြင်း
ခ။ စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းအနံ့ - စစ်ဆင်ရေးအတွင်းအပြည့်အဝပူးတွဲပါ
ဂ။ ရေထုညစ်ညမ်းမှု - လုံးဝညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ။
။ အစိုင်အခဲလေထုညစ်ညမ်းမှု - pyrolysis ပြီးနောက်အစိုင်အခဲသည်နက်ရှိုင်းသောလုပ်ငန်းများ၌ (သို့) ရောင်းနိုင်သောရေနံစိမ်းနှင့်စတီးဝါယာကြိုးများဖြစ်သည်
1. အရည်အသွေးအာမခံကာလ: pyrolysis စက်များ၏အဓိကဓာတ်ပေါင်းဖိုများအတွက်တစ်နှစ်အာမခံနှင့်စက်၏ပြီးပြည့်စုံသောအဘို့ကိုတစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အင်ဂျင်နီယာများအား ၀ ယ်သူ၏နေရာတွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းစသည်တို့ကိုသင်တန်းပေးသည်။
၃။ ၀ ယ်သူ၏အလုပ်ရုံနှင့်မြေနေရာ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလက်စွဲအစရှိသည်တို့နှင့်အညီထောက်ပံ့မှုပုံစံကို ၀ ယ်သူအားပေးသည်။
၅။ စက်ရုံသည် ၀ တ်ဆင်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ်ယူသူများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြည့်တင်းပေးသည်။
နောက်တစ်ခု: Carbon Black ကြိတ်ပစ္စည်း
စွန့်ပစ်တာယာပြုပြင်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်တာယာတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဓိကကုန်ကြမ်းသုံးမျိုးအားလုံးလုံးခွဲခြားသည့်ကျယ်ပြန့်သောပစ္စည်းကိရိယာစုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခန်းအပူချိန်တွင်ရာဘာ၊ သံမဏိဝါယာကြိုးနှင့်ဖိုင်ဘာတို့ကို ၁၀၀% ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကိုသဘောပေါက်သည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတုိုက်ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရအချင်း ၄၀၀ မှ ၃၀၀၀ မီလီမီတာအတွင်းတာယာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခိုင်မာသောသက်ဆိုင်မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုအရွယ်အစားကို ၅ မှ ၁၀၀ မီလီမီတာအတွင်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစနစ် (ဖောက်သည်မှထောက်ပံ့ပေးသည်) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုပလပ်စတစ်များအခြောက်အခြောက်ခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များပြုလုပ်ပြီးနောက်သင့်လျော်သောအရွယ်အစားကိုရရှိနိုင်သည်။ အစာကျွေးခြင်းစနစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပလတ်စတစ်များကိုအကူးအပြောင်းဘင်သို့သယ်ဆောင်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် pyrolysis system စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပလတ်စတစ်များအား pyrolysis အတွက်လမ်းခွဲမှတဆင့် pyrolysis ဓာတ်ပေါင်းဖိုထဲသို့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ကျွေးသည်။ အပူပေးစနစ်အပူပေးစက်ကိရိယာလောင်စာသည်အဓိကအားဖြင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို pyrolysis မှထုတ်လုပ်သောမဟုတ်သော condensable combustible gas ကိုအသုံးပြုသည်။
ဓါတ်ငွေ့အဆင့်တုံ့ပြန်မှုအပူချိန် 450-550 after အောက်ရှိလေဆာဖြင့်အစာရှောင်ခြင်း pyrolysis ၏အခြေအနေအောက်တွင် pyrolysis မှတဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ် pyrolysis စနစ်အတွက်, အနီရောင် conveyor, ခါးပတ်စကေး, ဝက်အူ conveyor ပြီးနောက်ပြီးနောက်တာယာ၏အပိုင်းအစများပြိုကွဲလိမ့်မည် ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက်ပူပြင်းတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမီးဖိုထဲသို့ဝင်ပြီးနောက်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနခွဲမှခွဲခြားခြင်းအားဖြင့် pyrolysis oil၊ ကာဗွန်နက်၊ pyrolysis wire နှင့် combustible gas၊
၁။ တံခါးကိုအပြည့်အဝဖွင့်ပါ။ အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာတင်နိုင်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊ ၂။ အေးစက်၏အေးမြသောအေးမြမှု၊ ဆီထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ ဆီအရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ၃။ မူလရေအသုံးပြုမှုကိုစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း။ အက်စစ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဖုန်များကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ 4. မီးဖိုတံခါး၏ဗဟိုမှာဖယ်ရှားရေးဖယ်ရှားရေး: လေလုံ, အလိုအလျောက် deslgging, သန့်ရှင်းသောနှင့်ဖုန်မှုန့် - အချိန်, ချွေတာ။ ၅ ။
စဉ်ဆက်မပြတ် Pyrolysis စက်ရုံ, သုတ် Pyrolysis စက်ရုံ, စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်သန့်စင်စက်ရုံ, အမှိုက်ပုံးအားပြန်လည်အသုံးချစက်, ပလတ်စတစ်ပြန်လည်ပြုပြင်စက်, တုရုပြာ,